Toerana Internet an-tserasera Greek - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(345 vato, average: 4.00 avy tany 5)
Loading ...Ny folo taona lasa dia nahita fitomboana tampoka ny isan'ireo trano filokana ao Gresy. Toy ny ampahany hafa amin'ny indostrian'ny fizahantany any Gresy, ny trano filokana grika dia manao izay fara heriny mba hisarihana mpilalao mandritra ny taona ary tsy mandritra ny fialantsasatra fahavaratra malaza ihany. Ao anatin'ireny ezaka ireny dia nanaraka ilay maodely tany Las Vegas ny casino Greek. Manjary tafiditra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny / hotely lehibe kokoa izy ireo, manolotra trano honenana, fialamboly, hetsika ara-panatanjahantena, fampisehoana fialamboly. Ny Marketing Marketing dia mikendry indrindra ireo mpizahatany vahiny, na dia malaza amin'ny kolontsaina grika aza ny lalao karatra, ary any Gresy dia misy klioba milalao karatra an'arivony manerana ny firenena izay tsy filokana.
Lisitry ny Top Sites 10 Grika amin'ny Internet
Androany ny fitsidihanay ny trano filokana tsara indrindra any Eropa mba hitohizan'ny fitsangatsanganana an-tanànan'ny morontsirak'i Mediterane miaraka amin'ny tantara manankarena. Ity firenena ity dia malaza amin'ny Lalao Olaimpika voalohany, nahandro tsy manam-paharoa sy ny filozofia. Ka, CasinoToplists nalefa tany Gresy!
Gresy - jeografia ary tantara kely;
Ny ara-dalàna amin'ireo mpandraharaha ao an-toerana, dia nangalatra ny ampihimamba;
Ny mpandraharaha iraisam-pirenena dia tsy misy voasakana tsy misy fahazoan-dàlana.
Ny renivohitra grika dimy any Atena dia manana adiresy;
Fahagagana mahatalanjona momba an'i Gresy sy Grika.
Ny filokana any Gresy dia manana tantara lava hatramin'ny andro fahagola. Ireo Grika taloha dia mpilalao mafana fo ary nino ny fihavian'ny lalao. Ohatra, ao amin'ny angano grika, misy angano fa taorian'ny fandresena ny Titans, Zeus sy ny rahalahiny Poseidon sy Hades dia nanao filokana hanapa-kevitra hoe iza no mahazo ny iray na ny faritra hafa amin'izao tontolo izao. Zeus dia nandresy ny Olympus, Poseidon - ny ranomasina ary ny Hades - ny ambanilanitra. Ity fizarana lahatsoratra ity dia tsy dia zava-dehibe loatra, mahaliana kokoa noho ny zava-misy fa ny herin'izao tontolo izao dia nilalao tamin'ny taolana.
Angano mahaliana manazava ny niandohan'ny filokana sy ny filokana. Indray mandeha i Tycho, ilay andriamanibavin'ny harena, dia nandeha teny amin'ny ala aloky ny Olympus, izay nitaona an'i Zeus (zazalahy kely nilalao sy libertine tamin'izany fotoana izany). Avy amin'ity firaisana ity dia teraka zazavavy - zaza tsy mahazatra, nahita fahafinaretana amin'ny famoronana lalao isan-karazany izay fanapahan-kevitra ihany no vokany. Nibanjina tamim-pifaliana ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpilalao izy ary nanentana ireo resy hamono tena. Nentaniny ny zanany vavy lozabe, nomeny mangingina ny trano, teo am-baravarana izay, izay nahasarika ny mpandalo, nandrehitra hazavana tsy maty.
Ankoatra ny angano dia resaho koa ny filokana sy ny tarehimarika ara-tantara. Araka izany, ao amin'ny "Odyssey", i Homer dia mitantara ny fomba nanoloran'ny mpiantsoantso ny dice, hampiala voly ny miaramila grika, mankaleo miandry ny fahirano an'i Troy. Plutarch mpahay tantara grika iray dia nanonona ny mpanjakavavy persiana Parisatis, izay mpankafy ny lalao dice.
Nentina tany Gresy avy any Azia i Craps ary nalaza tamin'ny sehatra sosialy rehetra. Misy toerana manokana - razamben'ny kasino voatokana ho an'ny lalao voarindra. Saingy, ny ankamaroan'ny mpanao lalàna Grika miresaka filokana dia tsy ekena, mihevitra ity karazana fialamboly ity ho fanamby amin'ny fitondran-tena ampahibemaso, manimba ny fototry ny fanjakana. Sazy ho an'ireo mpilalao tsy azo ahitsy, na inona na inona toerana misy azy eo amin'ny fiaraha-monina, dia andevo.
Gresy Maoderina dia namorona ny fepetra amin'ny fizahan-tany, mifandraika amin'ny filokana, ary koa mandrindra ny tsenan'ny gemblingovy amin'ny alàlan'ny manampahefana mahefa. Hentitra tokoa ny fiheveran'i Gresy ny filokana, ny politikan'ny governemanta dia kendrena hiezaka hisoroka ny olona amin'ny filokana. Araka ny lalàna grika, ny filokana dia avela ao anaty kasino ihany. Voarara tanteraka ny karazana filokana sy filokana ivelan'ny trano filokana rehetra, noho ny fanitsakitsahana ny lalàna eo an-toerana dia manome andraikitra amin'ny heloka bevava.
Ny trano filokana voalohany tany Gresy dia natsangana tamin'ny taona 1928 tao amin'ny faritr'i Loutraki, ireo kasino ara-dalàna 9 ihany no mandeha ao amin'ny firenena ankehitriny. ny fivezivezena amin'ny filokana ao Gresy dia mifehy ny komisiona filokana, izay natsangana tamin'ny 20 desambra 2011. Tamin'ny volana oktobra 2013 dia voafaritra ny habetsaky ny hetsika ataony: ny fahazoan-dàlana, ny fanaraha-maso ary ny fibaikoana ireo trano filokana miorina amin'ny firenena ao amin'ny firenena. Ny Komity dia misy mpikambana valo sy ny filoha iray izay voafidy mandritra ny dimy taona. Ny fahazoan-dàlana voalohany dia navoaka tamin'ny taona 1994, ny kasino telo: Casino Mont Parnes, Casino Korfu ary Casino Rodos. Any Gresy, tsy misy ampihimamba: ny trano filokana rehetra dia eo am-pelatanan'ny mpandraharaha vitsivitsy. Ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny Regency Casino, izay misy ny Casino Mont Parnes casino ao Tesalonika.
Tamin'ny taona 2002, ny governemanta grika dia nandany lalàna mampiady hevitra momba ny 3037/2002, izay mandrara ny lalao amin'ny lalao elektronika rehetra amin'ny toeram-bahoaka. Tamin'ny Aogositra 2011 ihany no nofoanana io lalàna henjana io. Ny lalàna vaovao dia mamaritra ny fitsipiky ny filalaovana andraikitra ary mampahafantatra ireo antsoina hoe "karatra mpilalao" tsirairay izay ilaina mba hahafahana miloka ara-dalàna ao Gresy. Mba hahafahana milalao amin'ny kasino dia nahatratra ny 21 taona ny Grika.
Aiza, inona ary inona no hilalao ao amin'ny kazao grika?
Amin'izao fotoana izao, i Gresy dia manana trano filokana sivy. Any amin'ny tanibe sy ny nosy Greek any Rhodes, Syros ary Corfu no misy azy ireo. Ny ankamaroan'ny trano filokana dia misokatra manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady ary mpiasa 24 ora isan'andro. Izy ireo dia lalao malaza rehetra toy ny roulette, blackjack, poker video, Punto Blanco, Baccarat ary milina slot. Mampiantrano fifaninanana poker ihany koa. Ny kaody fiakanjo any amin'ny ankamaroan'ny trano filokana grika - mahazatra fotsiny, fa aza manandrana miditra ao anaty akanjo amoron-dranomasina.
Casino Loutraki - Casino voalohany any Gresy. Any amin'ny trano fandraisam-bahiny eponymous no misy azy ao amin'ny Resort Loutraki-Agioi Theodoroi. Ity no iray amin'ireo trano filokana lehibe indrindra any Eropa, izay mirehareha ihany koa amin'ny spaoro sy tobin'ny fihaonambe. Ho fanampin'izany, ny mpilalao dia afaka milalao amin'ny fotoana malalaka ananany hankafy ny fahitana ny faritra, toy ny canal korinto, ny tranom-bakoka Ethnographic ary ny tempolin'i Apollo, korinto.
Ity no trano filokana malaza indrindra any Gresy izay hita ao an-tanànan'i Tesalonika, ilay "renivohitra avaratra" any Gresy, ary nanomboka ny taona 1996. Any akaikin'ny seranam-piaramanidina any Makedonia no misy azy ary 20 minitra avy eo amin'ireo toerana lehibe eto an-tanàna . Ny trano trano casino dia mendri-piderana amin'ny haingon-trano feno haingo. Manolotra milina slot 893 sy latabatra 66 ho an'ny lalao amin'ny birao ny casino. Misy ihany koa ny efitrano tsy miankina an'ny Regency High Rollers Club, izay misy milina slot 18 ary latabatra 14 ho an'ny lalao filalaovana.
Rhodes Casino dia malaza amin'ny maritrano sy ny endrika anatiny. Hita taratra amin'ny toetr'andro ao afovoan-tanàna taloha izany ary miorina amin'ny faritanin'ny hotely lafo vidy Grande Albergo delle Rose hotely fivarotana. Izy io dia manana ny zava-drehetra hampifalifaly mpilalao: milina slot, latabatra poker maro, roulette ary lalao hafa. Ny kaody dia miasa fehezan-dalàna: 19.00 navela akanjo marina sy anaty trano, ary aorian'ny 19.00 - akanjo hariva, akanjo na akanjo vita amin'ny akanjo hariva ihany.
Ao Corfu, renivohitry ny nosy Corfu, dia miasa amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana voalohany any Gresy, ary tamin'ny 1962 dia izy no kasino voalohany tany Gresy, niverina tamin'ny kodiarana roulette. Ao amin'ny ivon'ny fialamboly Corfu Holiday Palace no misy azy io, ary hatramin'ny faramparan'ny faha-80 taonjato faha-20 dia tao amin'ny lapan'ny Empress Elizabeth of Austria-Hungary, ilay Sissi Princess malaza. Misokatra ny trano fisakafoanana manomboka amin'ny 20.00 ka hatramin'ny 03.00 ho an'ireo mpitsidika mihoatra ny 23 taona.
Ity casino ity dia hita any amin'ny faritry ny ala Lefkos Pyrgos, any avaratra-andrefan'i Xanthi.
Ny maritrano ny trano misy rihana roa (2200 sqm) dia mifanaraka amin'ny halehiben'ny hazo mijoalajoala manodidina azy, mamorona habaka tokana mahavariana ireo mpitsidika hatramin'ny fotoana voalohany. Mivazivazy ny Grika fa ity no hany casino miasa amin'ny fanjakana - satria ny ambiny dia orinasa filokana tsy miankina na privatisé. Ao amin'ny casino ianao dia afaka milalao amerikanina roulette, blackjack, stud poker ary milina slot.
Ny trano filokana tsy miankina voalohany any Greece Porto Carras dia miorina ao amin'ny tranon'ny Sithonia Hotel Porto Carras, izay vatosoa tena Halkidiki. Misy milina slot 425, latabatra roulette 17, latabatra 13 blackjack 5 ary latabatra poker. Ankoatr'izay, misy efitrano VIP ho an'ny roller ambony, izay misy latabatra telo ho an'ny blackjack, latabatra roulette 5 sy 1 latabatra poker. Ny atitany dia noforonina tsara tamin'ny endriny tena izy any New Orleans, misy bara fisakafoanana sy bara.
Ity casino ity dia miasa ao amin'ny hotely iray, 10 minitra fotsiny avy eo afovoan'i Patra. Any amin'ny morontsiraka tsara tarehy any Rio, ao amin'ny zaridaina maitso maitso, no misy ilay toerana sarotra mirefy 35,000 metatra toradroa, manoloana ny lapan'i Venice. Casino Rio dia manolotra lalao latabatra mahazatra toy ny blackjack sy roulette, milina slot 279 ary mpankafy poker no miandry latabatra ho an'ny Texas Holdem Poker. Ny mpitsidika dia afaka milalao milina filokana amin'ny fotoana rehetra na amin'ny antoandro na amin'ny alina, satria izy ireo no casino misokatra 24 ora isan'andro.
Ny Casino dia ao amin'ny tanànan'i Syros Ermoupoli. Ity dia trano filokana vaovao - nanomboka tamin'ny volana aprily 1997. vao nanomboka niasa izy io, saingy trano fandraisam-bahiny "erope" teo aloha, natsangana tamin'ny 1830. Naverina am-panajana ny tranobe, ireo singa ara-tantara sy siklika, ary ankehitriny dia tena izy io Gem. Casino Syros dia manana latabatra 26 ho an'ny lalao malaza indrindra: ny roulette, ny blackjack ary ny stud poker, ary ny milina slot 185.
Ny Regency Mont Parnes Casino Resort dia miorina ao an-tanànan'i Mont Parnes, amin'ny halavirana 17 kilometatra monja avy eo afovoan'i Athens. Ity trano fivarotana casino sy hotely ity dia hita ao amin'ny toerana tokana sy idyllic indrindra Attica basin, manana tantara efa-polo taona mahery. Raha ny marina dia io no casino voalohany, izay nisokatra tany Gresy. Vao tsy ela akory izay dia novidian'ny vondron'ny Regency Entertainment SA ity, izay nanao fanatsarana sy fanavaozana maromaro, ary nitatra tamin'ny velarantany 18,000 toradroa. Amin'izao fotoana izao dia izy no casino manana fenitra iraisam-pirenena avo indrindra. Misy latabatra blackjack 16, latabatra roulette 32, ny latabatra 2 an'ny Punto Banco sy ny latabatra poker 2, ary ny slot 700 mahery. Ny trano filokana sy ny hotely fampiantranoana dia afaka miala sasatra sy mankafy ny serivisy amin'ny klioban'ny klioba Olympus. Ankoatra izany,
Na dia tsy mandrara ny mpandraharaha filokana aza ny lalàna Grika hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny filokana an-tserasera miasa ao Gresy, fa ny ampihimamba amin'ny filokana amin'ny Internet dia misy vondrona OPAP. Na izany aza, Greece, ny mpilalao dia afaka mampiasa tolo-kevitra isan-karazany ataon'ny mpandraharaha vahiny, izay mametraka ny toerana misy anao ho an'ireo mpampiasa Greek. Amin'izao fotoana izao, misy 118 ny trano filokana an-tserasera manome ny lalao amin'ny teny Anglisy na Grika ary manaiky ny taha amin'ny euro na dolara US.
Tamin'ny taona 2002, ny governemanta grika dia namoaka lalàna mandrara tanteraka ny endrika lalao elektronika rehetra. Na izany aza, ny fepetra voalazan'ity lalàna ity dia nihanalefaka tamin'ny alàlan'ny Act of 2011, izay mamela ny fahazoan-dàlana ho an'ireo mpandraharaha filalaovana amin'ny Internet filokana. Fa raha ny tena izy, ampihimamba amin'ny fanomezana lalao an-tserasera hatramin'ny 2030 an'ny orinasam-panjakana filokana OPAP. Na eo aza izany, tamin'ny 2013 dia nanapa-kevitra ny Fitsarana Eoropeana fa ny ampihimamba nomena ny OPAP, dia tsy mifanaraka amin'ny lalànan'ny Vondrona Eropeana. Noho izany, ny lalàna any Gresy dia tokony ovaina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny Vondrona Eropeana, i Gresy dia voatery manokatra ny tsenany amin'ny fifaninanana amin'ny orinasa hafa.
Ny tantara manankarena ao amin'ny casino an'i Rhodes
Rhodes Casino dia casino malaza sy manaitra tokoa any Gresy. Ela be talohan'ny nanombohan'ny trano hiasana kasino dia nivelatra ny trano fandraisam-bahiny 24 Mey 1927. Niaina olo-malaza maromaro avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, toa an'i Winston Churchill, Aristotle Onassis ary George Papandreou. Nahitana hetsika ara-tantara maro ny trano fandraisam-bahiny, toy ny fanaovan-tsonia ny Fanjakan'ny Isiraely naorina tamin'ny 1948.
Ny Casino Loutraki dia nekena ho namana tsara indrindra
Tamin'ny taona 2013, ny Club Hotel Casino Loutraki dia nomena ny loka iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana momba ny tontolo iainana "Green Key tamin'ny 2013" noho ny fandraisany anjara mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Nomena loka ny Casino amin'ny famolavolana drafitra hetsika ho fanatsarana hatrany ny tontolo iainana ao amin'ny andrim-panjakana misy azy ireo. Ireo fepetra noraisina dia mikendry ny hampihenana ny fanjifana rano, ny fampiasana vokatra azo avy amin'ny fako, ny vokatra fanadiovana, ny fizarana ny mpiasa sy ny mpitsidika momba ny fiarovana ny tontolon'ny fampahalalam-baovao.
Toerana misy an'i Gresy, ary tantara ara-tantara fohy
I Gresy dia tsy kisendrasendra dia antsoina hoe "ny fandrianan'ny sivilizasiôna Andrefana" - teto 3,000 taona talohan'i JK, nisy ny sivilizasiona voalohany tao amin'ny nosy Kreta, antsoina hoe Minoan. Amin'ny ankapobeny, ny tantara grika mahazatra antsika na dia amin'ireo boky fampianarana tantara - izany tantara momba ny polisin'i Sparta sy Athens izany, ity gladiatera ity dia miady, ity dia fifanandrinana nampalahelo teo amin'ny Empira Romana ary miankina amin'izany nanomboka tamin'ny taona 146 AD
Inona no atao hoe Gresy maoderina? Ankehitriny dia toeram-pialantsasatra malaza io. Hatramin'ny 1924 dia lasa repoblika parlemantera i Gresy ary tamin'ny 2002 dia lasa vola ofisialy euro. I Greece dia misy peripherie 13 (faritra) 51, ahitana 98 nom (analogies an'ny faritany rosiana). Saika XNUMX% ny mponina - Kristiana ortodoksa, ary fialantsasatra ankafizinao - Paska.
Casinos sy filokana ao Gresy
Ny zava-misy nahazoan'i Gresy ny vola miditra amin'ny fizahantany dia nisy fiatraikany tamin'ny fihetsiky ny governemanta amin'ny filokana. Ny trano filokana voalohany dia nosokafana tamin'ny taona 1928 teo akaikin'ny Loutraki (toerana spaoro malaza eto amin'ny firenena io). Ny kalitaon'ny serivisy omena dia avo indrindra amin'ny sehatra iraisampirenena, ary manomboka amin'ny lalao sy fandokoana ny efitrano fitsidihan'ny mpitsidika dia manomboka euforia.
Tsy latsa-danja eo amin'ireo mpizahatany no mankafy ny filokana ao Tesalonika, mitondra ny lohateny «Regency». Izy io no lehibe indrindra ary misy koa ankoatry ny trano filokana manontolo an'ny trano fisakafoanana manan-tsaina 3, fisotroana, ary na dia ny tranony fanaovana teatra aza.
Kilometatra vitsivitsy miala an'i Atena, trano filokana «Mont Parnes». Any amin'ny Tendrombohitra Parnassus no misy azy io, ary amin'ny alàlan'ny fiara tariby ihany no ahatongavanao any. Ny Works dia trano filokana mahafinaritra isan'andro afa-tsy ny alarobia. Mila manana pasipaoro ianao ary mandinika ny kaody akanjo - tsy ankasitrahana ny fanatanjahan-tena sy ny fitafiana mahazatra.
Ireo mpitia fientanam-po sy hetsika ivelan'ny trano dia manintona ny safidin'i Siroe ao amin'ny nosy Ermoupoli. Eto, ankoatry ny efitrano filalaovana miisa 3 misy trano miorina amin'ny taonjato faha-19, dia afaka mankafy fitsangatsanganana tsy hay hadinoina amin'ny sambo sy fitsangatsanganana amin'ny galeria ambanin'ny tany ianao.
Ny orinasa lehibe indrindra dia ny fikambanana filokana ao Gresy.
Lalao amin'ny aterineto any Gresy
Araka ny efa noresahintsika tetsy aloha, ny monopolista lehibe indrindra ao amin'ny firenena - dia fikambanana iray no nangalatra. Izy no mifehy ny anjaran'ny liona amin'ny filokana amin'ny Internet ankehitriny. Ny fikambanan'ny filokana lavitra RGA dia tsy tian'ireto toe-javatra ireto fa ny eo an-toerana na dia tsy te-hiditra ao amin'ny efitranon'ny poker eropeana aza izy ireo.
Eto ianao dia afaka milalao trano filokana an-tserasera, fa amin'ny tranonkala manana alalana ihany. Gresy dia nanao an'izany vola rehetra izany tsy nandehandeha lavitra ny firenena. Noho izany dia tsy tokony hanome fotoana fialan-tsasatra ireo mpandraharaha casino mahazatra, saingy misy ny fotoana hanandramana ny tsiro ao an-toerana ary mbola hatoky tena 100% ny antoka amin'ny fandoavana ny fandresena.
Ahitana karazam-pitaovana maro ny Atena.
Acropole . Ahitana trano 4: ny fidirana lehibe (propylene), tempoly ho fanomezam-boninahitra ny mpiaro an'i Atena, ny Parthenon, ny tempoly ho fanomezam-boninahitra ny andriamanibavin'ny fandresena, ary ny lapan'i Erechtheum ho fanomezam-boninahitra an'i Poseidon sy Athena. Ny fahalehibiazan'ireo tranobe dia mahavariana sy mahavariana, amin'ny fahitana ny fahitana dia maharitra 4-5 ora.
Tempolin'i Zeosy . Toerana: akaikin'ny Acropolis sy Syntagma, ny kianjan'ny tanàna lehibe. Amin'izao fotoana izao, ny tempoly be voninahitra taloha dia sisa tavela. Saingy tsy maintsy milaza aho fa tsy latsa-danja indrindra ary takiana amin'ny fijerena azy.
Tranombakoky ny Ankizy . Adiresy: Kydathenaeon, 14; Plaka. Hatramin'ny 1987, ny tranom-bakoka dia mampifaly ireo olon-dehibe izay reraky ny fahitana ireo sisa tavela sy sarivongana ary tsanganana, mazava ho azy, ireo tanora mpitsidika. Misy foana ny zavatra mandeha: karazana atrikasa, fampirantiana ary fampisehoana rehetra.
Museum of History of Greek Costume . Adiresy: 7, Dimokritou. Ny fanangonana ny tranom-bakoka mihoatra ny 250,000 fitafiana amin'ny vanim-potoana rehetra. Izay rehetra liana amin'ny lamaody dia hahaliana ny mahita ny fomban'ny Grika amin'ny fampandrosoana.
Tranom-bakoka ao Gresy . Adiresy: fihaonan-dàlana Vassilissis Sophias Av. ary Rizari, 2. Gresy araka ny fantatsika rehetra fa malaza amin'ny raharaham-pirenena. Eto ianao dia afaka mahita izay rehetra mifandraika amin'ny raharaha miaramila, manomboka amin'ny karatra sy fanamiana hatramin'ny fanamiana ara-tantara.
Zava-baovao mahaliana momba an'i Gresy sy Grika
Fisotroana ankafizina -Café. Sotroina amin'ny karazan-karazany rehetra misy litatra ara-bakiteny izy io, saingy tsy hajaina ny dite;
Sakafo ankafizin'ny groupe souvlaki, kebab kely kely amin'ny kirany, mangotraka matetika;
Mihoatra ny andro 250 androany masoandro isan-taona, misy plastika maivana eny amin'ny tafon-trano;
Ny ranomasina dia tsy mihoatra ny 136 km, ary avy any amin'ny firenena rehetra;
Araka ny isan'ny fisaraham-panambadiana any Gresy no farany amin'ny Vondrona Eoropeana;
Ho mpampianatra na dokotera, fa amin'ny ankapobeny dia ny asa aman-draharaha isan-trano dia tena lafo be sy tsara karama;
"Ne" dia grika amin'ny "eny";
Mianatra lesona 2 any am-pianarana, anisan'izany ny teny anglisy;
Mpivavaka be ny Grika - isan'andro any am-pianarana alohan'ny fotoam-pianarana mamaky vavaka, fialantsasatra ankafizinao - Paska.
Rhodes dia toerana fanaovana fampisehoana malaza mandritra ny lolo iray tapitrisa izay mifindra eto isan-taona
Gresy eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
0.1 Lisitry ny Top Sites 10 Grika amin'ny Internet
2.0.1 Toerana misy an'i Gresy, ary tantara ara-tantara fohy
2.1 Casinos sy filokana ao Gresy
2.2 Lalao amin'ny aterineto any Gresy
2.2.2 Zava-baovao mahaliana momba an'i Gresy sy Grika
2.2.3 Gresy eo amin'ny sarintanin'i Eoropa